It is me. Ko Niknayman.: တန်ပြန်ဂါထာတော်မြတ်ကြီး
တောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားပူဇော်တော်မူသော သံ (၈)ချက် ဘုရားရှိခိုးဂါထာတော်မြတ်ကြီး (တန်ပြန်ဂါထာတော်မြတ်ကြီး)။
သံသာရစက္က၀ိဒ္ဓံသံ ၊ သံသုဒ္ဓမဿသြရသံ၊
သံစိဏ္ဏကံဘဝေအာသံ ၊ သံဃံအပိသုမာနသံ။
ယနေ့တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှအစပြုကာ သစ္စာတခုခုဆိုပြီး၍ ဤ သံ (၈) ချက် ဂါထာ တော်ကြီးကို နေ့စဉ် (၇) ခေါက် ဘုရားဂုဏ်၊တရားဂုဏ်၊သံဃာဂုဏ်ကို အာရုံပြု၍ ရွှတ်ဖတ် ပူဇော်ကြပါရန်၊ အစွမ်းအလွန်ထက်မြက်သော ဘုရားရှိခိုးဂါထာတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။
ဤ သံ (၈) ချက် ဂါထာ တော်ကြီး၏အစွမ်းမှာ “ ထိုထိုသူတို့၏ပြုသော အမှုကံများသည် ထိုသူတို့ထံသို့သာ ယခုချက်ချင်းလက်ငင်း တန်ပြန်သက်ရောက်သွားစေခြင်းဖြစ်သည်။
ရှေးဆရာ့ဆရာကြီးများကလည်း တန်ပြန်ဂါထာတော်မြတ်ကြီး အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့ထိတိုင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကံငါးပါးမလုံခြုံသော အုပ်ချုပ်သူနှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါ လူမိုက်များကြီးစိုးကာ ကံကြီးထိုက်သော အပြစ်ကြီးများကို ကြူးလွန်ပြစ်မှားနေကြပေပြီ။
(၁) မကောင်းသောအမှုပြုသောထိုသူတို့ထံသို့ သူတို့ပြုသောမကောင်းမှုကံအလိုက်ကို တန်ပြန်ရရှိ ခံစားနိုင်စေခြင်းအကျိုးငှာ၎င်း၊
(၂) ကံငါးပါးမလုံခြုံသော အုပ်ချုပ်သူနှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါ လူမိုက်များ အကျွန်ုပ် တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကင်းစင်ပပြောက်စေခြင်း အကျိုးငှာ၎င်း၊
(၃) ထိုသူတို့ပြုသော အကုသိုလ်မကောင်းမှုကံ၏ အကျိုးဆက်များ မိမိတို့ထံသို့ မသက်ရောက် မကပ်ညှိလာနိုင်စေခြင်းအကျိုးငှာ၎င်း၊
(၄) သူတော်ကောင်းတရားများ ထွန်းတောက်လွှမ်းမိုးကာ သာယာဝပြောသော နိုင်ငံတော်ကြီး ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းအကျိုးငှာ၎င်း၊
ဤ သံ(၈) ချက် ဂါထာတော်မြတ်ကြီးဖြင့် မိမိကိုယ်၊ မိမိ၏မိသားစု၊ မြို့ရွာ၊ တိုင်း၊ နိုင်ငံတော်အား စိတ်တွင်ထင်စွာ အာရုံလွှမ်းခြုံ၍ နိုင်ငံသားတိုင်း မိမိတို့တတ်စွမ်းသ၍ နေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုး ရွတ်ဖတ်ထုံမွှမ်း ပူဇော်ကြပါရန် လေးမြတ်စွာ ရေးသားအပ်ရပေသည်။
(ရေးသားဖေါ်ပြသူ - သုမုခ)။
Posted by Ko Niknayman at 7:29 PM